Tongolo | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Fitsipika momba ny fambolena sy ny fambolena eo amin'ny volo
Ny sarda no solontenan'ny lozika tena mahasoa indrindra, noho izany dia tsy mahagaga raha be mpitia be ny vokatra ao an-trano sy ny fambolena varotra. Matetika no mitombo ny vatomamy eo amin'ny volo mba hahazoana vinaingitra vitaminina. Shallot dia manana tombontsoa lehibe maromaro momba ny tongolobe: fisintonana, avo rongony, fanoherana mangatsiaka ary ny fanoherana mafana, izay ahafahanao mahazo vokatra mahasoa kokoa aloha kokoa.
Fanondroana tsipika. Tsara fitondran-tena sy fikarakarana
Misy tongolo lay (Allium) namboarina ao anaty zaridaina iray ho an'ny hatsaràna, eo akaikiny, toy ny hoe misy havokavoka sy tongolobe, voataizan'ny zaridaina. Eo amin'izao tontolo izao dia misy karazany 600 eo ho an'ny tongolobe. Zana-boaary nohanina, ary mahafinaritra ny voninkazo. Ireo no voninkazo manintona indrindra maniry mandritra ny fotoana maharitra.
Ny antony mahatonga ny tongolobe sy ny fanesorana azy ireo
Alao sary an-tsaina hoe mahandro tsy misy tongolobe dia tsy azo atao. Ity fitaovana mahasoa ity dia ampiasaina amin'ny saika avy amin'ny sakafo rehetra: voalohany, faharoa, ny famokarana, ny famokarana, na dia misy menaka marikivy mena aza. Fanosehana tongolobe vokatry ny bibikely Toa tsy misy tsaratsara kokoa noho ny toholaingon-java-maniry - ireo dia tsy voatango voatabia na alika amoron-dranomasina ivelany.
Ahoana no hanamboarana zana-kiraro maitso eo amin'ny varavarankely
Tahaka ny hoe, nahoana isika no mitombo ao an-trano, na eo amin'ny talantrano saika misy fivarotana, na ririnina aza dia afaka mividy karazana voly? Saingy raha ny marina, betsaka ny tombontsoa azo ato amin'ity lesona ity. Vary amin'ny vitaminina sy ny fiterahana ny homemade greens, manarona ny sakafo mahavariana izy, mena ary efa eo am-pelatanana, ary maimaim-poana maimaim-poana.
Batun tsipika: fampitahana, fampiasana, toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny onion batun dia manana tsiro tena tsara ary tena ilaina amin'ny vatan'olombelona. Eo amin'ny firenentsika, mitombo io tongolobe io ary tsy ampiasaina amin'ny fihinanana, fa amin'ny fitsaboana. Hojerentsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny baikon'ny tsipìka sy ny fampiharana azy. Onions-batun: ny voka-bary kalorie, ny sôsialy sy ny vidin'ny sakafo avy amin'i Tatarka, ny tongolo sand, ny tongolo gasy, ny fistula - ireo anarana rehetra ireo dia antsoina hoe tongolo-batun.
Ny fampiasana zanaona maitso: fananana mahasoa sy fanoherana
Inona no afaka manamboatra sakafo mahazatra, manome azy tsara tarehy ary manampy trondro maivana kokoa noho ny volon'ondry mena? Noho ny fahatsoran'ny fambolena manokana (ao amin'ny firenena, ao amin'ny trano fonenana, ao an-trano eo amin'ny varavarankely), ity vokatra ity dia mety ho levona vaovao mandritra ny herintaona, na dia tsy misy loharanom-pahasalamana hafa aza.
Famaritana ny karazana akondro bitu
Iza no tsy tia manala ny tenanao miaraka amin'ny tongolobe maitso mamy eo amin'ny latabatra fisakafoanana. Indrindra raha ianao no nanangana izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny karazana tongolo-koveta, na, amin'ny karazany tsara indrindra. Ny onion-batun dia tsy mitovy amin'ny biriky mahazatra eo amin'ny haavon'ny ravinkazo sy ny tsy fisian'ny tongolobe. Ireo tongolobe ireo dia mamboly afa-tsy amin'ny ahi-maitso.
Shallots: kalôria, fampiasana, toetra mahasoa sy ny fanoherana
Fitiavana be dia be noho ny tsiro malefaka sy malefaka ary mamy kely, izay tsy miteraka fofona aorian'ny fiterahana. Ankoatr'izay, ny heriny sy ny tongolobe dia tsy miteraka ranomaso rehefa mihintsana, mifanohitra amin'ireo tongolobe mahazatra. Inona no tapa-tsinay? Shallot dia zavamaniry tsy manam-paharoa amin'ny fianakaviana ounion, ary ny tongolobe dia angonina ao anaty lobola, izay mahatonga azy ho toy ny tongolo lay.
Ny fomba hanamboarana tongolo, ny fitsipika ankapobeny amin'ny sakafo famokarana
Ny onion dia iray amin'ireo vokatra tsara indrindra amin'ny zaridaina. Amin'ny fotoana iray isan-taona dia hanome tsiron-tsakafo miavaka tsara izy ireo, manala azy ireo amin'ny vitamina sy ny singa marindrano. Saingy mba hahazoana vokatra tsara dia tsy maintsy mahafantatra ny fomba hanomezana sakafo ny tongolobe ny mponin'ny fahavaratra. Fantatrao ve? Ny sakafo mahazatra indrindra eran'izao tontolo izao - izany hoe tongolobe.
Ahoana ny fametrahana tongolobe amin'ny ririnina
Ny tongolobe dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra izay mampitombo ny zaridaina rehetra, na inona na inona ny faritra kelin'ny klimasy na ny orana. Taorian'ny fijinjana ilay olana dia matetika mitombo ny fananganana tongolo. Manoloana ny olana amin'ny vokatra voamaina, manontany tena ny tompony hoe: ahoana no fomba hitehirizana tsara ny tongolo mba hisorohana ny fatiantoka?
Ny fampiasana tongolobe: ny tombony sy ny fahasimbana amin'ny fahasalamana
Onion - zavamaniry iray isan-taonany ao amin'ny tongolo gasy. Fambolena Homeland - Azia Atsimo Andrefana. Iray amin'ireo fambolena voajanahary mahazatra indrindra. Mampiasaina amin'ny fampakaram-bady, fanafody, cosmetology. Fantatrao ve? Ny Ejipsianina fahiny dia nanonona tongolobe "ny andriamanitr'ireo andriamanitra" ary naharesy lahatra fa izao tontolo izao dia naorina taorin 'ny ohatra nisy ny tongolo be dia be.
Ahoana ny fomba handaminana ny fiaramanidina anidina
Ny nofinofin'ny mpizaha tany sy ny zaridaina isaky ny fahavaratra dia fararano mamy sy manitra. Ary ahoana no ahafahanao manelingelina rehefa manimba ny fambolena zaridaina, manimba ny legioma ary manamaivana ny vokatra azony, dia mandeha amin'ny fomba hanatanterahana nofinofy. Matetika dia tsy maintsy mandany fotoana sy ezaka be ianao mba hanafoanana ny bibikely mampikorontana ao amin'ny tranokalanao, amin'ny fomba maro samihafa.
Chives: Calorie, sehatra, toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny amboadia, na ny tongolobe, dia fantatra amin'ny anarana hoe skoroda lion - tena mitady ny mpamboly. Tena ilaina izy io, manana karazana zava-mahadomelina maro, manaloka ny tranokala mandritra ny voninkazo, mampatahotra ny bibikely maloton'ny zaridaina sy ny zaridaina an-jaridaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra momba ny toetra ilaina sy ny karazana zavamaniry ianao.
Torohevitra momba ny fomba fananganana zonoka, mahasoa ho an'ny zaridaina mpamboly sy mpamboly, na dia mety ho liana sy mahasoa ary manana traikefa aza izany. Zenezy - zavamaniry tena ilaina eo amin'ny latabatrao. Tsy afaka ny hisaintsaina sakafo vitsivitsy tsy misy azy. Mampiasaina vaovao, maina, ampiasaina amin'ny fanaovana sôkôsy, pikam-bary, fanatanjahan-tena, fiarovana.
Miankohofana i Slyzun: fananana mahasoa sy fanoherana
Anatin'ireo karazana tongolobe rehetra dia toerana iray manokana no misy ny tsipìka slyzun, izay fantatra koa amin'ny hoe mangyre, mihodinkodina, manasitrana. Heverina fa ny anaram-ponina nomeny azy no nahazoany ny fisafidianana jiro rehefa mamboly zavamaniry. Milaza izy ireo fa toy ny ranomaso izany. Tsy ny zavamaniry ihany no mitombo ao amin'ny zaridaina legioma, fa hita any anaty ala ihany koa eny amin'ny tany be vato sy any anaty ala any Siberia Atsinanana sy Andrefana.
Misafidy ny karazan-tsakafo tsara indrindra
Ny famafy voa eo amin'ny tany, ny fambolena sy ny fambolena ao amin'ny zaridao dia zavatra mahafinaritra indrindra. Ny fandinihana iray momba ny dingan'ny fitomboana dia mendrika zavatra. Mba hampitomboana ny zana-ketsa rehetra, mila mikarakara azy ireo ianao, saingy zava-dehibe ny fisafidianana ny voa tsara. Iray amin'ireo voalohany nianjera tamin'ny tany ny tongolobe lohataona. Misy karazana karazan-javamaniry marobe, ary etsy ambany ny karazana tsara indrindra amin'ny zana-ketsa.
Rehefa mandavaka tongolo zato dia manadio ny tongolo lay
Ny habetsahana sy ny kalitaon'ny voa nambolena, ary ny fotoana haharetany dia miankina betsaka amin'ny fanangonam-bokatra ny tongolo. Izany no hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Rehefa nesorina teo am-pandriana ny legioma Toy ny ankamaroan'ny legioma dia tokony esorina ny sipo rehefa feno tanteraka. Amin'ity tranga ity, isika dia afaka miantehitra amin'ny fiarovana ny tsiro sy ny fitehirizana maharitra ny legioma.
Zavona fampirantiana tsy misy zana-ketsa: mitombo tsy misy olana
Tsy misy zaridaina afaka manao zaridaina. Ny karazana fampirantiana dia iray amin'ireo malaza indrindra. Navoaka tany Holandy. Mankasitraka azy noho ny tsirony mahafinaritra, ny vokatra ary ny haben'ny habeny. Ny lahatsoratra dia mifantoka amin'ny tongotra Exibishen ary amin'ny fampitomboana azy amin'ny voa amin'ny fomba tsy voajanahary. Famaritana sy tarehin-tsarobidy Ny biriky amin'io karazana io dia tena lehibe, afaka manatratra habe 120 hatramin'ny 400 g.
Karazana tongolobe hozaraina ao amin'ny firenena
Tena zava-dehibe amin'ny fihinanana sy ny fitsaboana ny olona, ​​ary mahazatra sy mahazatra ny vokatry ny fambolena varimbazaha sy tongolo gasy. Izany no mahatonga ireo mpamokatra zaridaina na mpamboly tsirairay mamboly azy ireo eo amin'ny efitranony mba hampifaliana ny tenany sy ny havan-dry zareo tsy vitan'ny sakafo ara-pahasalamana, fa koa amin'ny famolavolana tsara ny zaridaina na sisin-tany - misy karazan-javamaniry azo hanina ihany koa.
Fomba hahazoana harona tsaramaso ao amin'ny Exichen
Matetika ireo zokiolona eto amin'ny firenentsika dia maniry tongolobe amin'ny karazana tongolobe iray na hafa. Iray amin'ireo karazany malaza indrindra amin'ny zavamaniry ny tongolobe Exibichene. Ahoana no ahafahana manamboatra fomba famolavolana karazan-javamaniry izay hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Ny fampisehoana sy ny toetrany dia nampidirina tany amin'ny faritanin'ny firenentsika avy any Holandy ary nanjary nalaza ho isan'ny mponin'ny fahavaratra.
Ny fomba hanamboarana ny ovy eo amin'ny Ural
Ny voankazo dia iray amin'ireo legioma ampiasaina indrindra amin'ny sakafo. Ny singa iray manan-danja amin'ny fambolena mahomby amin'ity voankazo ity amin'ny toetry ny fambolena mampidi-doza dia ny fisafidianana karazana sahaza sy fikarakarana bebe kokoa azy. Ny karazana tsara indrindra ho an'ny Urals Ny karazana zana-borona tsara indrindra ho an'ny Ural dia: Arzamas -lukovitsy dia mitombo 40 ka hatramin'ny 80 g, manana endrika miloko marevaka, mavomavo mavo amin'ny maotina ivelany, ao anatiny dia fotsy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Tongolo